यसरी जोगाऔं कोरोनाबाट बालबालिकालाई ? – Ramro Sandesh यसरी जोगाऔं कोरोनाबाट बालबालिकालाई ? – Ramro Sandesh
बनेपा, कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरमा सबै उमेर समुह जस्तै धेरै बालबालिकाहरु संक्रमित भए । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर बालबालिकाका लागि संक्रामक देखिएको अवस्थामा अर्को नयाँ लहरमा पनि बालबालिकाहरुका लागि निकै खतरनाक हुने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । त्यसैले बालबालिका अझै सचेत रहनु आवश्यक छ ।
महामारीको समयमा अभिभावकहरुले के गर्ने ? के नगर्ने ? अभिभावकहरु संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? अनि बालबालिकाहरु नै संक्रमित भएमा के गर्ने ? इण्डियन एक्सप्रेसमा डाक्टर शेफाली गुलाटीले दिएको यस्तै जिज्ञासाहरुको जवाफ अनुवादित गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहरले बढी बालबालिकाहरुलाई असर गर्ने धेरै विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । सिंगापुरमा यस्तो भैसकेको पनि छ । हामीले भाइरसविरुद्ध प्रतिरक्षा हासिल गर्ने भनेको कि त खोप लगाएर हो, कि त एकपटक संक्रमित भैसकेपछि हो । धेरै वयस्क मानिसहरु पहिलो तथा दोस्रो लहरमा संक्रमित भैसकेका छन् । हालसम्म खोपहरु केवल वयस्कहरुको प्रयोगका लागि मात्र स्विकृत भएका छन् । पहिलो लहरमा संक्रमित भएका बालबालिकाहरुको संख्या भन्दा दोस्रो लरहमा संक्रमितहरुको संख्या धेरै छ । यसको कारण चाहीँ समग्रमा संख्या नै धेरै हुनु र सबै परिवार नै संक्रमित भएका कारण पनि हुनसक्छ ।
भाइरस संक्रमणको सम्भावनाका हिसाबले बालबालिकाहरु वयस्क जत्तिकै जोखिममा हुन्छन् । तथापि कोभिड १९ संक्रमित बालबालिकाहरु साधारणतया लक्षण विनाका वा कम गम्भीर खाले लक्षण भएका हुने गरेका छन् । बालबालिकाहरुमा भाइरसको असर कम हुनुको कारण चाहीँ भाइरस संक्रमण हुने तरिकाका साथै बालबालिकाको रोग प्रतिरोधी प्रणालीका कारणले हुनसक्छ ।
घरमै हेरचाह तथा आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित बालबालिकाहरुमा यस्ता कडा लक्षण देखिएमा सचेत हुनु पर्दछ । सास फेर्न गाह्रो हुनु, घ्यारघ्यार हुनु र दुध चुस्न नसक्नु । किशोरावस्थाका बालबालिकामा छाति दुख्नु र दबाब महसुस हुनु । अनुहार तथा ओठ निलो बन्दै जानु । पिसाब कम लाग्नु, सरीर चिसो बन्नु तथा छालामा धब्बाहरु बन्नु । बालबालिकामा द्धिविधा तथा अलमल बढ्नु, लोसे बन्दै जानु ।
आइसोलेसनको अवधि ः लक्षण देखिएका विरामीका लागि लक्षण देखिएको दिनबाट १० दिनसम्म र लक्षण देखिन छाडेको थप ३ दिनसम्म ।
बच्चाको हेरचाह गरिरहँदा अभिभावकहरुले ठिक तरिकाले, सही किसिमको मास्क लगाउने । ग्लोभ्स तथा पिपिइ लगाउने । संक्रमित बच्चालाई घरमा रहेका वृद्ध हजुरबा हजुरआमा लगायतसँग हेलमेल हुन नदिने । बाबु आमा दुबैजनाले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेका भएपनि महामारी पूर्वको अवस्थामा जस्तो ढुक्क हुन हतार गर्नु हुँदैन ।
कोभिड १९ बाट संक्रमित वा भर्खरै निको भएका बालबालिकाहरुलाई लक्षणवीहिन भएको २ हप्तापछि मात्र अन्य नियमित खोपहरु बच्चालाई लगाउन सकिन्छ ।
मास्क लगाउन नसक्ने शिशु तथा साना बालबालिकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगाउनका लागि के गर्ने ? मास्कको साटो फेस सिल्ड लगाउने भएमा पुरै अनुहार छोप्ने गरी लगाउनु पर्दछ । फेस सिल्डले अनुहारको दुबैपट्टि ढाकेको हुनुपर्दछ भने चिउँडो भन्दा तलसम्म आएको हुनुपर्दछ । फेस सिल्ड लगाउँदा त्यो फुटेर अनुहार तथा आँखा लगायतमा हुनसक्ने घाउचोटका विषयमा सचेत हुनु पर्दछ ।
आफ्नो हात सधे सफा राख्ने । घर आउने बित्तिकै आफु तथा आफ्ना अन्य बच्चाको हात धुन नबिर्सिने । हात धोएर मात्रै शिशुलाई छुन े।
घरमा प्रायः छोइरहने सतहहरु दिनमा नियमित रुपमा डिसइनफेक्टेन्ट स्प्रे तथा वाइपरले सफा गरिरहने । कुरा बुझ्ने उमेरका बालबालिकालाई हातले अनुहार छुने बानीलाई छाड्न लगाउने ।